Samsung Galaxy J7 Prime နဲ့ Galaxy Tab E 8.0 တို့အတွက် Oreo update support ပေးမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့တဲ့ T-mobile! – AsiaApps
January 15, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Samsung Galaxy J7 Prime နဲ့ Galaxy Tab E 8.0 တို့အတွက် Oreo update support ပေးမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့တဲ့ T-mobile!
Samsung Galaxy J7 Prime နဲ့ Galaxy Tab E 8.0 တို့အတွက် Oreo update support ပေးမယ့် အကြောင်းကို T-mobile အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်နေ့က ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Oreo ဆိုတာကတော့ Android မှာနောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ version ပါ။ Galaxy J7 Prime နဲ့ Galaxy Tab E 8.0 တို့လို Midrange အမျိုးအစား device တွေကို Support ပေးမယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလှပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Galaxy J7 Prime နဲ့ Galaxy Tab E 8.0 တို့အတွက် Oreo Update ကိုတော့အချိန်အနည်းငယ်တော့စောင့်ရဉီးမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Samsung အနေနဲ့ model မြင့် brand တွေဖြစ်တဲ့ Galaxy S8/S8+ တို့မှာ Oreo Update ရအောင်အရင်ကြိုးစားနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ model မြင့် brand အသုံးပြုသူတွေက Oreo update ကိုအရင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပြီး Midrange အမျိုးအစား user တွေအနေနဲ့ ကတော့ အချိန်အနည်းငယ်ထပ်ပြီးစောင့်ရမှာလို့ပဲဆိုရမှာပါ။ Oreo update မှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ feature အသစ်တွေပါဝင်မှာဖြစ်တာကြောင့် စောင့်ရတာတော့ တန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
T-Mobile confirms Oreo for Samsung Galaxy J7 Prime and Galaxy Tab E https://t.co/lhUWoEt4Ui pic.twitter.com/htzsqBa7Hz
— BBC SEWA (@bbcnepalisewa) January 15, 2018
Android, Firmware Updates, Samsung, T-mobile